Ukupakisha imeko yoshishino lomatshini
Umatshini wokupakisha waseTshayina waba yinto yokuqala emva kwexesha, inkqubo yemizi-mveliso ayakhiwanga ngo-1980. Emva kohlengahlengiso nokuvula, imfuno yezixhobo zokupakisha iyaqhubeka isanda. Ngaphantsi kwenkxaso kurhulumente, umatshini wokupakisha waseTshayina ukukhula konyaka kungaphezulu kwe-30%. Xa ngo-1990, ukukhula konyaka i ...
Wonga malini ngonyaka?
ngomphathi ku 20-06-29
Ukulinganisa okuzenzekelayo kunye nokupakisha umgca VS Imanyuwali epheleleyo yokulinganisa kunye nokupakisha Umzi-mveliso omnye wokutya wenza iilekese, iibhisikidi, iimbewu njl.njl -nobunzima bokulinganisa ...
Isilinganiselo esizenzekelayo kunye nomtya wokupakisha i-VS epheleleyo enesisindo kunye nokupakisha Indawo enye yokutya yenza i-pipi, iibhiskithi, iimbewu njl. Njl. ngokuzenzekelayo zilinganisa ...
Ubunzima bentloko obungama-24 bulinganisa njani iintlobo ezi-4 kunye ezi-6?
Ngaba uyathanda ukutya umxube wamantongomane, iziqhamo ezomileyo kunye nokunye ukutya okutyayo, nkqu kukho ukutya okulungele umxube. Ukuxuba kushushu kwaye kuyathandwa lulutsha. Imfuneko yentengiso iphakanyiswe ngokukhawuleza, abavelisi bokutya bafuna umatshini wokupakisha ozenzekelayo ukuze wehlise ...
Ungayikhetha njani imodeli yokulinganisa ubunzima abaninzi?
Ngeendleko eziphezulu kubasebenzi, iimfuno zesantya esiphezulu, ngakumbi nangakumbi umzi-mveliso wokutya uya kukhetha umlinganisi weentloko ezininzi ukufezekisa ubunzima bemoto. Ngaba uyazi ukuba ungayikhetha njani imodeli echanekileyo yokulinganisa ubunzima bokutya? Zintathu izinto ekufuneka umzi-mveliso wokutya uziqwalasele? 1.Isantya esifunekayo ...